कांस्य हर्सम्यान त्रयी यी मितिहरूको लागि क्लासिक रोमान्स उपन्यास | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, रोमान्स उपन्यास
पाउलीना साइमन्सको प्रसिद्ध त्रयी
म अझै पनि भ्यालेन्टाइन डे मोडमा छु, कालो मुटुको साथ यो समय-समयमा गुलाबी पनि हुन्छ। छ को त्रयी कांस्य घोडा, द्वारा लेखिएको पाउलिना साइमनहरूयो ती मध्ये एक हो जुन मेरो लागि पग्लन्छ। र सम्भवत एकको सबैभन्दा प्रसिद्ध शीर्षकहरू मध्ये एक रोमान्टिक लि gender्ग यो नयाँ सहस्राब्दी मा। त्यसोभए यदि तपाईं मधुमेह आत्माहरू वा कामदेव skeptics हुनुहुन्छ भने, कुनै थप पढ्नबाट जोगिनुहोस्। तर यदि तपाईं भावुक हुनुहुन्छ र प्रेम आत्मामा हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको पढाइ हो यी मितिहरूको लागि।
प्रेम कथा बीचमा ठूला अक्षरहरू टाटियाना मेटानोभ र रातो सेनाको लेफ्टिनेन्ट अलेक्ज्याण्डर बेलोव (Shura हामी सबैलाई जो सँधै उहाँलाई सम्मान गर्छौं) ती मध्ये एक हो छाप छोड्नुहोस्। यदि तपाईं पनि मन पराउनुहुन्छ दोस्रो विश्व युद्ध र रूसी अगाडि विशेष रूपमा, यो पहिले नै लिलामी हुनेछ। मेरो मामला मा, सबै सर्तहरु पूरा भएको थियो। यो ट्रेन मा ती पठनबाट थियो पुस्तक अनुहार चिपकिएको संग भावना को छालहरु मास्क गर्न। त्यो पहिलो उपन्यास संग। निम्न कागजातमा खस्नु भन्दा पहिले मैले तिनीहरूलाई मेरो मोबाइल फोनमा पढ्न सकें।
पाउलिना साइमनहरू पुरानो मा जन्म भएको थियो लेनिनग्राड, आज सेन्ट पीटर्सबर्ग, इन 1963। उनी लेख्न मन पराउँछिन् जब उनी बच्चा थिए र १० बर्षको उमेरमा उनी आफ्नो परिवारसँग संयुक्त राज्य अमेरिका बसाईन्। यो त्रयी, लिखित र पाँच बर्षमा प्रकाशित, उहाँको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो.
1 कांस्य हर्सम्यान (२०००)
2 टाटियाना र अलेक्ज्याण्डर (२०० 2003)
3 गर्मी गार्डन (२०० 2005)
4 किन यो पढ्न
कांस्य हर्सम्यान (२०००)
मा लेनिनग्राड, १ 1941 XNUMX१ युरोप मा युद्ध धेरै टाढा देखिन्छ। दुई बहिनीहरू त्यहाँ बस्छन्, टाटियाना र दशा मेटानोभ, जो आफ्नो परिवार संग एक सानो अपार्टमेन्ट साझा। स्टालिन मुनिको जीवन कठिन छ, तर जर्मनहरू आइपुग्दा यो नरकमा परिणत हुनेछ। तर पहिलो टाटियाना, भोली कान्छी बहिनी मात्र १ 17 बर्षको उमेरमा भेटिन् अलेक्जेन्डर, संयुक्त राष्ट्र रेड आर्मी रहस्यमय र समस्याग्रस्त विगतको लेफ्टिनेन्ट। को माया यो तात्कालिक हो। तर त्यहाँ धेरै हुनेछ कठिनाइ तिनीहरूका परिवारहरूदेखि शहरको भयानक घेरासम्म तिनीहरूको माझमा उभिन दिनुहोस्, कि तिनीहरूको प्रेम लगभग असम्भव छ। लगभग
टाटियाना र अलेक्ज्याण्डर (२०० 2003)
युद्धको लागि, गर्भवती, बिरामी र उजाड, टाटियानाले यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुर्‍याउँछ। त्यहाँ उसले सुरु गर्न कोशिस गर्नेछ नयाँ अस्तित्व भ्रम संग कि अलेक्जेन्डर, सकियो कैदी, कालो भाग्य बाट टाढा जानुहोस् जुन तपाईं बर्बाद जस्तो देखिनुहुन्छ। यसैबीच, अलेक्ज्याण्डर अकथनीय पीडित। यो तातियाना र उनको आशाको स्मृति हो कि ऊ अझै जीवित छ जसले उसलाई बलियो राख्छ। जब युद्ध समाप्त हुन्छ दुवैले भेट्न लड्ने छन्। र तिनीहरू हुनेछन्।
गर्मी गार्डन (२०० 2005)
टाटियाना र अलेक्ज्याण्डर, उनीहरूको छोराको साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका फर्कन सक्षम छन्. तिनीहरू बाँचे एक भयानक युद्ध गर्न को लागी, तर ती चोटहरु जुन तिनीहरूले आत्मा मा लिन्छन् खुला रहन्छ। Y बिभिन्नताको वर्षहरूले तिनीहरूलाई अपरिचित बनायो। पहिलो पटक तिनीहरू परिवारको रूपमा बाँच्न सक्दछन, तर यो सजिलो हुँदैन। तिनीहरू अस्थायी रोजगारीहरूको खोजीमा देश यात्रा गर्नेछन्, तर त्यो अनौंठो जीवन त्यो कठोर भावनात्मक बोझबाट हताश उम्कने अवस्था हो। तपाईंको प्रेम र खुशी खतरामा छन्, र जो अवस्थाबाट सबैभन्दा धेरै पीडित हुन्छन् त्यो हो उसका छोरा।
किनकि यसमा यो सबै छ: उत्कृष्ट कथा, उत्कृष्ट सेटिंग र उत्कृष्ट पात्रहरूमाध्यमिक पनि। उनको लागि तीव्रता को पूर्ण कथा। तपाईंको पनि त्यस्तै अनुभूति छ यथार्थवाद घेरा हालेको लेनिनग्राडको फ्रिज सडकहरूमा जाँदै वा s० को दशकको संयुक्त राज्य अमेरिकाको लामो राजमार्गहरू यात्रा गर्दै।
र, निस्सन्देह, द्वारा गुण र करिश्मा यसको मुख्य पात्रहरूलाई दिइयो। उनीहरुसंग तिमी तिमी हाँस्दै रुन। तपाईं उनीहरूको उतार-चढाव र नाटकबाट पीडित हुनुहुन्छ त्यति नै गहिरो रूपमा उत्प्रेरित हुनुभयो। तपाईं ती दुवै सँग शारीरिक र तिनीहरू बीच, र तपाईंको यात्रा गर्नुहुन्छ। तपाईं बाँचिरहनु भएको छ र तिनीहरूको मुठभेड र गलतफहमीहरू, उनीहरूको रहस्य, निराशा र पूर्ण गर्न जुनसुकै महसुस गर्नुहुन्छ। तर सबै भन्दा माथि तपाईं पनि त्यस्तै माया गर्नुहुन्छ। एक प्रेम जसले तिनीहरूलाई किशोरावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म सँगै राख्छ। ती ती मध्ये डे भेज एन कुआन्डो तपाईंलाई भन्नु पर्छ र त्यसपछि तपाईंले बिर्सनु हुँदैन।
जे भए पनि, हामी मध्ये तातियाना र अलेक्ज्याण्डरको प्रेममा परेका छन र तिनीहरूले मेरो वचनहरूलाई प्रमाणित गर्न सक्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » रोमान्स उपन्यास » कांस्य हर्सम्यान त्रयी यी मितिहरूको लागि क्लासिक रोमान्स उपन्यास
किम्बरली क्यारिंगटन भन्यो
मलाई लाग्दैन कि मँ कहिले त्यस्तो पुस्तकहरू पढ्छु जसले मेरो आत्मालाई अत्यन्तै छुन्छ। म तिनीहरूलाई फेरि पढ्न कहिल्यै थाक्दिन र पहिलो दिन म सधैं उत्साहित हुन्छु। वास्तवमा, यसले तेस्रोको अन्त पढिरहेको छ र एक कप क्याक जस्तो रोइरहेको छ। केवल अद्भुत।
किम्बरली क्यारिंगटनलाई जवाफ दिनुहोस्
हामी पक्कै सहमत छौं, किम्बरली। सिधा मुटु पढ्ने। तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद।
आत्माले कहाँ आराम गर्छ? ईथान बुशको नयाँ किस्त